थरीथरीका प्रेम, यस्ता छन् प्रेमका प्रकार | OB Media
Our Biratnagar | ४ श्रावण २०७६, शनिबार ०७:३८
एजेन्सी, ४ साउन । प्रेम आफैंमा एक यस्तो चिज हो, जसमा भावना र महसुस (फिलिङ) जोडिएको हुन्छ । प्रेम यस्तो अनुभव हो जसमा मानिसहरुलाई संशार पहिलेभन्दा सुन्दर लाग्न थाल्छ । प्रेममा परेका मानिसहरुलाई यस्तो लाग्छ मानौं उसको वरिपरि चारैतिर मात्र प्रेम छ ।
तर के तपाईलाई थाहा छ प्रेम कति प्रकारको हुन्छ ? या तपाईले कहिल्यै सोच्नु भएको छ कि मैले कस्तो प्रकारको प्रेम गरिरहेको छु ? पक्कै पनि हरेक मान्छेको मनमा आफूले गरिरहेको प्रेम कस्तो प्रकारको हो भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न हुन्छ । तर धेरैजसोले त्यसको जवाफ पाउँदैनन् ।प्रेम गर्ने तर प्रेमको प्रकार थाहा नपाउनेका लागि हामीले सहज होस् भनेर एक आलेख तयार पारेका छौं । यो आलेखमा प्रेमका प्रकारबारे उल्लेख गरिएको छ ।
४५ प्रतिशत आरक्षण दिनुपर्ने माग गर्दै भोलि साउन ४ गते प्रदेश १ बन्द घाेषणा
शान्त शान्तिश्री, शान्तिश्री आफूलाई ‘लो प्रोफाइल’मा राख्न रुचाउँछिन्